Download Ikpuchi, na WhatsApp nledo | Site na Linux
Download eruola, ndị WhatsApp nledo
Ike gwụrụ nke enweghị ike ịlele ma ọ bụrụ na mmadụ na-eleghara gị anya Ozi WhatsApp? Ebe ọ bụ na ngwa nyeere-acha anụnụ anụnụ akọrọ ọrụ ọ na-omenala ka mara mgbe mmadụ ga-emepe ozi gị. N'agbanyeghị nke ahụ, n'ihi nkatọ ụlọ ọrụ natara maka mwakpo nzuzo ya, ha kpebiri na enwere ike izere nke a.
Download eruola, ndị WhatsApp nledo site kapeeti
N'ihi ya, ọtụtụ ndị nwere nkwarụ a atụmatụ, si otú a na-egbochi ihe ọmụma a ịbụ inweta ndị ọzọ.
Internet adịghị eguzo, na e nwere ugbua a spy ngwa maka WhatsApp nke na-eme ka o kwe omume iji rụọ ọrụ a ọbụlagodi na ndị ọzọ nwere ya arụ ọrụ. Na-akpọ Ji, WhatsApp nledo.
Ọ bụ ngwá ọrụ iji jikwaa kọntaktị gị ma nata ọkwa mgbe kọntaktị dị n'ịntanetị ma ọ bụ na anọghị n'ịntanetị, si otú a wepu oge njikọ oge ikpeazụ abaghị uru, ọ na-egosi gị njikọ ikpeazụ nke onye ọrụ ahụ akọwapụtara.
N'okpuru ebe a, anyị enyela ndepụta nke iji ngwa ahụ Ji, WhatsApp nledo.
- Nkwupụta ọdịyo mgbe kọntaktị jikọrọ ma ọ bụ kwụpụ.
- Ọ na-egosi gị oge njikọ ikpeazụ nke kọntaktị niile na ịnwere ike nwee ma ọ bụ gbanyụọ ldị ka ọkwa nke onye ọ bụla.
- nwere ike ịnata ọkwa mgbe onye ọrụ gbanwere foto profaịlụ ha.
- Ọ ga - ekwe omume ịnata amamọkwa mgbe mmadụ ụfọdụ gbanwere ọkwa ha.
- Ọ chọrọ ịdenye aha na netwọkụ mmekọrịta nke igwe nyocha kachasị mkpa n'ụwa, Google+.
- will ga-achọ njikọ na internet inwe ike iji ngwa.
- alsokwesịrị ime ka ngwaọrụ ahụ kwụsịtụ, nke mere na ọ ga-ekwe omume ịnweta ọkwa.
Na nke a, ị ga - ahụ na ọ bụghị ihe niile ka a na - ewere ka ihe furu efu iji nweta ozi gbasara iji ngwa ngwa ngwa ngwa, ekele maka WhatsApp nledo, okpu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Download eruola, ndị WhatsApp nledo
Onye hel na ezi uche ha, onye ọrụ blog ma ọ bụ na ọ bụghị, onye ọrụ GNU / Linux ma ọ bụ na ọ bụghị, ga-eji Whatsfuck. Facebook na ụlọ ọrụ ya bụ igwe ọrụ nzuzo zuru ụwa ọnụ. M na-arịọ gị ka ị gụọ isiokwu ahụ na anya dị oke egwu ma mee nyocha gị. Free Basics, ọrụ "intaneti n'efu" nke onye nzuzu Zuckerberg na-enye, bụ ụdị nke nledo buru ibu nke ụlọ ọrụ ya na NSA rụpụtara, na-achọ imebi ihe mgbochi cryptographic na nchekwa ma gọnahụ iji ngwaọrụ ndị na-echebe onye ọrụ na nzuzo ha.
Ihe ọjọọ IMHO, gbalịsie ike n'ihe na-arụpụta.
Zaghachi Dayane Qu
Ngwa dị ezigbo mma, n'ihe gbasara nkọwa dị n'elu, ị ga-etinyerịrị paranoia ahụ. Ọ bụ eziokwu, enwere ọmụmụ ihe na-egosi na ị ga-eji ọtụtụ ijeri awa iji ledoo onye ọ bụla. Ya mere ekwenyela na etiti eluigwe na ala. Ọ bụrụ na ọ bụghị nke ahụ hapụrụ maka ndị ama ama, ọ bụ eziokwu? Ekele na ezigbo isiokwu
Magburu onwe ya, taa, anyị kwesịrị ịmara maka teknụzụ a niile, otu ụbọchị anyị nwere ike ịchọ ya, onye ọ bụla n'ime anyị ga-ama ihe kpatara ya na maka ya, mana ọ dị mma ịmara na ọ dị.
Ewpero 1 kedu ihe diri m
Kù maka FLISoL 2015 na Cuba